Storelọ Ahịa Ejiji Egwuregwu Na-adịchaghị Anya: Anya nwoke Anya
Nemesis ọla edo
Ezigbo Zebra Wood Browline Style RetroShade Ugogbe anya maka anwụ site na WUDN
Ịgachi price $ 80.85 Zọpụta $ -80.85
Banyere ugogbe anya maka anwụ
Anya m gburugburu
Nkasi obi mara mma
Ngwakọta Zebra Wood Browline Ugogbe anya maka anwụ
Na-ejikọta acetate eco-friendly browdee imezi osisi na ihe niile na-eke zebra osisi ụlọ arụsị, anyị ngwakọ browdee ugogbe anya maka anwụ bụ ezigbo ngwakọta nke usoro kpochapụwo na nke oge a. Ekele maka ihe pụrụ iche, nke zigzag woodgrain nke zebra osisi, ụzọ abụọ a nke ugogbe anya maka anwụ bụ otu-nke-ụdị - na-enye nkwupụta ụdị mbinye aka nke pụrụ iche dịka onye ji ya.
1Ejiri aka mee, bee, ma kee ya site na osisi osisi zebra nke obodo na acetate enyi na enyi browdee-Emebere okpokolo agba
2Anya m na - ebute ụlọ ọrụ na - ebute ụlọ ọrụ maka nghọta doro anya na ọnọdụ kacha gbaa
3Ihe siri ike, na-agbanwe agbanwe nke ukwuu site na igwe anaghị agba nchara mmiri
4Abịa na Cylindrical achara ebu Case & Micro-Fiber Travel obere akpa
Odighi Anya doro anya
Ejiri ya na anya m nwere ike dị elu, osisi zebra ahụ browdee ugogbe anya maka anwụ na-enye nchebe UVA / UVB zuru oke mgbe mgbochi na-enwu gbaa, nchacha mkpuchi mkpuchi na-eme ka ọhụụ gị doo anya na ọnọdụ kachasị mma.
Zọ nke Oge A na-abịakwute Ochie
Na ijikọta oge aesthetics nke obodo zebra osisi na kpochapụwo browdee imewe, ọ bụla ụzọ anyị ngwakọ browdee shades bụ ngwakọta zuru oke nke oge gara aga na ugbu a.
Ebumnuche Ultra-durable nke Wuru Oge Ikpeazụ
Dual mesikwuru igwe anaghị agba nchara spring-juru n'ọnụ hinges-eme ka ọ bụla ụzọ nke anyị osisi ugogbe anya maka anwụ wuru-adịru mgbe na-enye gị zuru okè kwesịrị ekwesị.
Ahịa Ajụjụ na Azịza
Ọ bụ n’ezie ka ugogbe anya maka anwụ dị ka osisi?
Ee, ugogbe anya anwụ ọ bụla nke WUDN sitere n’ezi osisi.
Ndi iko ndị otu size dabara niile?
Ee, ugogbe anya maka anwụ WUDN bụ otu nha dabara niile. Offọdụ ugegbe anyị buru ibu karịa ndị ọzọ. Dịka ọmụmaatụ, iko skateboard na-abawanye ibu ma maa mma karịa ụmụ nwoke.
Ndi iko ndia bu Ray-Ban?
Ugogbe anya maka anwụ WUDN abụghị Ray-Ban, ọ bụ ezie na anyị na-arapara na ụdị kpochapụwo ma nha na nhazi.
M ga-echegbu onwe banyere mmiri ozuzo? Kedu otu iko ndị a na-enweghị mmiri?
Iko ndị ahụ na-ekpuchi mmiri kpamkpam. M na-eyi ha n’ọdọ mmiri. Ikwesighi ichegbu onwe gi banyere mmiri ha na-ada.
Ekwesịrị m ịnweta akpa ekwentị osisi dabara?
N'ezie. Igwe ugogbe anya anwụ gị ọhụrụ ga-adị mma na iji ekwentị bamboo kwekọrọ maka ekwentị iPhone ma ọ bụ Samsung Galaxy.
Emebere m anya m?
Eeh, ugogbe anya anwụ ọ bụla nke WUDN na-abịa na enyo enyo. All anyị eke ugogbe anya maka anwụ na-ruo eruo na ụlọ ọrụ na-eduga CR39 polarized lenses. Nke ahụ bụ 100% UVA / UVB nchedo, nchacha nchacha ihu na mgbochi mkpuchi maka ọhụụ ọhụụ ọhụụ ọbụlagodi ọnọdụ kachasị mma.
Anya m na-ejikọ aka na-enyere aka ma m kwesịrị ịkwụkwu ụgwọ maka ha?
Ọ bụrụ na ị na-etinye oge ka ukwuu n'oge gị n'èzí, n'okporo ụzọ, na golf, ịkụ azụ, ịchụ nta, na mmiri ma ọ bụ n'ugwu, anya m nwere ike ịkọ ego ọ bụla.
Enwere m ike ịkpọrọ ha gaa na optometrist m ma gbanwee lenses na lensị ọgwụ?
Na ụfọdụ ụdị gụnyere iko achara anyị, ị nwere ike. Ma, ọ ga-abụ na optometrists uche na ma ma ọ bụ iji wụnye ọhụrụ anya m. Ọ ga-dị mwute ikwu na ị ga-agbanwe akwụkwọ ikike ngwaahịa gị.
Anya m bụ plastik ka ọ bụ iko?
Anya m bụ lenses polycarbonate na-eguzogide ọgwụ, gbochie 100% nke ụzarị UV ma nwee atụmatụ njigide ọkụ.
Enwere anya m dị?
Mba, iko ndị ahụ na-abụkarị otu ma ha enweghị nhọrọ nhọrọ iji dochie anya ya.
Ngwurugwu cylboo achara na-abịa na iko?
Ee, achara cylinder biara na ugogbe anya. Ndị mmadụ hụrụ ikpe ahụ n'anya ma jiri ya maka nzube ndị ọzọ.
Ndi iko ha na abia na micro-fiber ebu akpa nke di okpukpu abua dika ihe nhicha anya?
Eeh. Na ajụjụ a zuru oke guzobere.
Osisi na-ehicha ikuku anyị, na-enye anyị ndo, ma na-enye anyị nri na-atọ ụtọ .. Ọ bụ ya mere maka osisi ọ bụla nke na-enye ya ndụ maka ngwaahịa anyị anyị ga-akụ otu 1 maka 1.